Hevitra mandalo resaky ny mpitsimpona akotry: tsy mbola nisedra an’izany hoe fitsapana ny hevi-bahoaka | NewsMada
Hevitra mandalo resaky ny mpitsimpona akotry: tsy mbola nisedra an’izany hoe fitsapana ny hevi-bahoaka
Lakalaka ny fiainana, eto amin’ny firenena izay miankina amin’ny safidim-bahoaka ny rafi-pitantanana atao hoe demôkrasia dia nohon’ny tranga maro nifanesisesy tsy olom-boafidy ny vahoaka mivantana no hiandraikitra vonjy maika ny fitondrana ao aorianan’ny fametrahan’andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny fialany noho izy ity nilatsaka
amin’ny fifidianana an’izay handimby azy. Mazava moa ny voalaza ao anatin’ny lalampanorenana, fa amin’ny fisehon’ ny toe-draharaha toy izao dia ny filohan’ny Antenimieran-doholona no mamdimby toerana mandra-piandry ny valin’ny fifidianana izay manambara ny safidin’ny vahoaka mikasika ny fanankinany fahatokisana amin’izay hitantanana ny raharaha-pirenena mandritran’ny dimy taona ho avy. Eto aloha dia mety angamba ny fitsipihana momban’ny fahasamihafan’ny hoe fitantanana ny raharaha-pirenena sy ny hoe fitantanana ny firenena. Rehefa ela ny ela mantsy dia mety ho tafiditra any an-tsain’ny mpitondra fa toy ny zaza ny vahoaka ka mila tantanana ny firenena.
Raha hiverina amin’ny fiakaran’ingahy Rivo Rakotovao eo amin’ny toerana tampony ao amin’ny fitondrana, dia afaka lazaina fa tsy voadinik’ireo nanomana ny lalampanorenana ny fisehon’ny toe-draharaha ankehitriny. Tsy nampoiziny mihitsy ny mety fitrangana loholona tsy voafidy no ho lasa Filohan’ny Sénat. Io moa dia efa aty antenantenan-dàlana vao taitra ny mpiray tetika, raha nijejojejo amin’ny fisehona fanaovana fisokafana tany am-piandohana ka nanolotra an’ilay toerana tamina olona tsy tao amin’ny antokon’ny tena izay fantatra fa afaka ametrahana fitokisana fa tsy handefona ivoho, tonga saina ihany raha efa tonga ny fotoana ka ilay olona io no lasa hisolo toerana. Fati-drà ihany no hany afaka tsy ampiahiahy ! Peta-toko no lasa natao ho fanavotana, ny filoham-pirenena no nanendry an’ity olona hanolo azy eo amin’ny fitondrana tampony. Tsy mandingana ny soratra ao amin’ny lalampanorenana izany nefa maro no milaza fa mifanipaka amin’ny foto-kevitra iorenan’ny lalampanorenana izay mametraka ny fitondrana tampony amina olona nisedra fifidianana.
Ho an’ny fahamarinana mikasika ny fanajana lalàna : «izay voasoratra ihany no manan-kery ho lalàna» , izany angamba ny antony tsy nanaovan’ny mpanohitra resabe an’ny fahatongavanan’i Rivo Rakotovao ho tompon’ andraikitra amin’ny fandimbiasana an’i Hery Rajaonarimampianina. Tsy tena manaja ny toe-tsaina manandratra ny vahoaka ho loharanon’ny fahefana ny fisehon’ny firafitry ny fitondrana tampony manomboka amin’ny faha 7 ny volana ambony. Izay anefa ny lalàna ka tsy maintsy hiononana, tsy hararaotina ho antona fikorontanana.